Christie's မှာ Leonardo da Vinci ရဲ့ Leonardo da Vinci ရဲ့ Salvator Mundi ဇာတ်ကားဟာဆန်းကြယ်တဲ့လက်ရာတစ်ခုပါ။
တစ် ဦး ကလက်ရာပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီကလက်ခံထားသောပန်းချီကားကို Salvator Mundi ဟုအမည်ပေးပြီးနယူးယောက်ရှိ Christie's တွင်နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
အလွန်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုနှိုးဆွပေးသည့်အနုပညာလက်ရာတစ်ခု။ တစ် ဦး ကပါရမီ: Leonardo da Vinci ။ ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိတစ် ဦး ကလက်ရာ Salvator ကမူ Mundiနက်နဲသောအရာတခုကိုနှင့်အတူ။
၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Salvator ကမူ Mundi ('ကယ်တင်ရှင်ကမ္ဘာကြီး') သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်သတင်းမီဒီယာများကိုကြီးမားစွာခံစားစေခဲ့သည်။
လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီက ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်ပထမဆုံးသောပန်းချီကားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လီယိုနာဒိုဒါရိုက်တာမှကျန်ရှိနေသေးသောပန်းချီကား ၂၀ ကျော်ရှိသည်ဟုယူဆပါကထူးခြားသည့်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်သည်။
ဒီပန်းချီကားကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်အစွမ်းထက်တဲ့အနုပညာလက်မှတ်တွေထဲကတစ်ခုအပါအ ၀ င်၊
Leonardo ၏နောက်ဆုံးပန်းချီကားသည်ပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းခြင်းတွင်ဖြစ်သည် Salvator ကမူ Mundi အတွက်ထူးခြားတဲ့တွေအများကြီးအဖြစ်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် စစ်ပြီးခေတ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာညနေခရောင်းချမှု လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့၊ ခရစ်စတီးတွင်. ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 100 million ။
(လေလံရလဒ်များ၏ HJD ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ရှုရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ)
ဒီထူးခြားသောအနုပညာနမူနာအပေါ်မှတ်ချက်ပေး, Loic Gouzerနယူးယောက်ရှိ Christie's ရှိစစ်ပြီးခေတ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ၊
“ Salvator Mundi သည်အချိန်ကာလ၏အရေးအပါဆုံးအနုပညာရှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထင်ရှားဆုံးသောပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။ ဒီလက်ရာကိုစျေးကွက်ထဲရောက်အောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဟာတစ်သက်တာမှာတစ်ကြိမ်လောက်ရရှိခဲ့တဲ့ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀၀ ခန့်ကဖန်တီးခဲ့သော်လည်းလီယိုနာဒို၏လက်ရာသည် ၁၅ နှင့် ၁၆ ရာစုနှစ်များကဲ့သို့ယနေ့ခေတ်ဖန်တီးနေသည့်အနုပညာအတွက်လည်းသြဇာသက်ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ပြီးခေတ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်ညနေခင်းအရောင်းအဝယ်၌ဤပန်းချီကားကိုဆက်ကပ်ခြင်းသည်ဤပုံ၏ထာဝရသက်ဆိုင်မှုကိုသက်သေပြသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားခဲ့ရသည်။
ပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း Salvator ကမူ Mundi
အဆိုပါ Salvator ကမူ Mundi ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒေသတွင်းလေလံပွဲတစ်ခုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Overpaints သည်ပန်းချီကားကိုအကြီးအကျယ်ဖုံးအုပ်ထားပြီးပိုင်ရှင်အသစ်များသည်ပန်းချီကားကိုသက်သေပြရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်အနုပညာလက်ရာများကိုသုတေသနပြုပြီးအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်နေစဉ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အတူရှေ့ဆက်သွားခဲ့သည်။
ဒီအခိုက်အတန့်မတိုင်မီ၊ Salvator Mundi ရဲ့ တည်ရှိမှု အချို့သောဒရာမာမပါဘဲမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ပန်းချီကားကို ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်လောက်မှစတင်ခဲ့သည်။ တည်ရှိသည်ဟုယူဆရသည်၊ ၀ င်းဒိုးရှိအင်္ဂလိပ်တော်ဝင်စုဆောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောမာစတာကိုယ်တိုင်၏အနီရောင်မြေဖြူတွေ သုံး၍ ရေးဆွဲထားသည့်ပန်းချီကားများကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် walnut panel ပေါ်ရှိဤဆီသည်ဖျက်စီးခံခဲ့ရသည်ဟုယူဆခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုလူသိများပြီးသေချာသည်အနုပညာလက်ရာများသည် Charles I နှင့်သက်ဆိုင်သည် (အင်္ဂလန်ဘုရင်၊ ၁၆၀၀-၁၆၄၉) တော်ဝင်စုဆောင်းခြင်းစာရင်းမှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုပန်းချီကားအား Charles II ၏ ၁၆၆၆ Whitehall ရှိတော်ဝင်စုဆောင်းမှုစာရင်းတွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ Salvator ကမူ Mundi ထို့နောက်၎င်းသည် ၁၇၆၃ မှ ၁၉၀၀ အထိပျောက်ကွယ်သွားပြီး၎င်းသည် Cook Collection အတွက်ဆာချားလ်စ်ရော်ဘင်ထံမှဝယ်ယူမှုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
Leonardo ၏နောက်လိုက် Bernardo Luini သို့ပန်းချီကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ထိုအချိန်ကစာရေးသူ၏အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုမသိခဲ့ကြပါ။ ထို့အပြင်အနုပညာလက်ရာများသည်ခရစ်တော်၏မျက်နှာနှင့်ဆံပင်ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေသည့်ကျယ်ပြန့်သောဆေးသုတ်ခြင်းကိုပြသနေပြီးသူ၏အသွင်အပြင်များကိုထင်ရှားစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အဆိုပါအလုပ်ထို့နောက်မှအပ်နှင်းခဲ့သည် Sotheby's မှာ ၁၉၅၈ မှာပေါင် ၄၅ နဲ့လေလံတင်ခဲ့တယ်နောက်တဖန်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်, မှသာ 2005 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် အမေရိကန်အိမ်ခြံမြေတစ် ဦး အဘို့အသေးငယ်တဲ့အမေရိကန်လေလံအိမ်မှာကဝယ်ယူသောအခါ ထက်နည်း£ 7,500.
Dianne Dwyer Modestini, နယူးယောက်တက္ကသိုလ်အနုပညာအင်စတီကျု၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ၌ပန်းချီထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ Kress အစီအစဉ်၏အကြီးတန်းသုတေသနလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူသည်သင်ပေးသူဖြစ်သည်။ ပန်းချီကားကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်.
သူသည် da Vinci ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူသိလိုက်သောအခါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်အမှတ်ရမိသည်။ "ငါ့လက်ကိုလှုပ်ခဲ့ကြသည်။ ငါအိမ်ပြန်သွားပြီးအရူးဟုတ်မဟုတ်မသိဘူး” \_ t
ဒေါက်တာ Modestini သည်ပန်းချီကားကိုပြန်လည်ပြုပြင်စဉ်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရာတွင်အလွန်ဂရုစိုက်ခဲ့သည်၊ လုပ်ငန်း၏ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဒီပန်းချီကားဟာ Leonardo da Vinci ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးလက်ရာပဲလို့နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်.
အဆိုပါ Salvator ကမူ Mundi အောက်ပါအတိုင်း ဂန္ iconographyခရစ်တော်၏ ၀ က်ပုံသဏ္figureာန်ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြင့်သူသည်ဘယ်ဘက်လက်ဝဲလက်တွင်ကျောက်ဆူး orb ကိုင်ထားခြင်းနှင့်သူ benediction တွင်မြင့်မားသောညာဘက်ကိုမြှောက်ပေးသည်။
အလွန်နက်ရှိုင်းသောအရိပ်များမှထူးဆန်းစွာပေါ်ထွက်လာသောအပြစ်ကင်းစင်ပြီးနီးပါးဘုရားသခင့်လှပသောမျက်နှာသည်အလွန်စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာများကိုဖော်ပြနေသောမျက်လုံးများသည်အနောက်တိုင်းပန်းချီနှင့်ဆင်တူသည်။ ~ ခရစ်ရဲ့
ခရစ်တော်၏လက်များ၊ သူ၏ဆံပင်၊ orb နှင့်သူ၏ drapery ၏ထူးခြားကောင်းမွန်စွာဆံပင်ကောက်ကောက်များစွာကိုအမှန်တကယ်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးသူတို့၏မူလအခြေအနေနှင့်နီးစပ်သည်။
ခရစ်တော်၏လက်နှစ်ဘက်စလုံး၊ သူ၏ဆံပင်၊ orb နှင့်သူ၏ drapery ၏ထူးခြားစွာဆံပင်ကောက်ကောက်များသည်အမှန်တကယ်ပင်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးသူတို့၏မူလအခြေအနေနှင့်နီးစပ်သည်။
ထို့အပြင်ပန်းချီကားသည် Leonardo ၏ထူးခြားကောင်းမွန်သောလက်ရာများအတွက်ထူးခြားသောတည်ရှိမှုနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုခံစားချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆိုပါ Salvator ကမူ Mundi နှင့် orb ၏နက်နဲသောအရာ
ပန်းချီပညာကိုလေ့လာခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းတို့သည်ရှည်လျားပြီးရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအဖွဲ့ကသယ်ဆောင်သည်။ ပန်းချီရေးဆွဲသူနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုမှာတညီတညွတ်တည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ခရစ်တော်၏ပတ်လမ်းသည်ဘုရင်အဖြစ်ကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာ၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ လီယိုနာဒိုဒါဗိုင်းရပ်စ်တွင် Orb မှထုတ်ယူလိုက်သောအလွန်သေးငယ်သောပါဝင်မှုများကကျောက်စရစ်ကျောက်ဖြစ်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် Renaissance မှော်စွမ်းအားများရှိသည်ဟုကျယ်ပြန့်စွာယုံကြည်ကြသည်။
ကမ္ဘာ၏ ၀ တ္ထုအပြင်၎င်း၏စက်လုံးပုံသဏ္theာန်၏ပြည့်စုံမှုသည်၎င်းကိုအံ့ nearly ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အနှစ်သာရအားဖြင့်ပေးသည်။
လီယိုနာဒိုဒါရိုက်တာ၏ခိုင်မာသောယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အထောက်အထားကိုပွင့်လင်းမြင်သာသော orb မှတဆင့်မြင်တွေ့ရသောလက်ဝဲဘက်ရှိ pentimenti အမြောက်အများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်
သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူအချို့က Leonardo သည်ပန်းချီတွင်စောင်းလာသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်၊ အလင်း၏နက်နဲသောအရာများကိုမည်သို့ဖမ်းယူနိုင်မည်ကိုစွဲလမ်းနေသူဖြစ်သောကြောင့် Orb ကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပုံစံကိုသရုပ်ဖော်ရန်ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကန့်ကွက်ပန်းချီကားရဲ့စစ်မှန်မှုအပေါ်အန္တရာယ်ထင်ကြေးစေ၏။
ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးသည် ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်ဂါးဒီးယန်းတွင် Dalya Alberge မှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်ပေါ်လာသည်။ ယခုဆောင်းပါးသည် Christie ၏သတင်းစာအပေါ်တရားရေးဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် Walter Isaacson ၏ရည်ညွှန်းကိုးကားထားသည့် Leonardo နှင့်ပတ်သက်သောသူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်သူသည်“ ရှုပ်ထွေးသောကွဲလွဲချက်” ဟုသူသတ်မှတ်ထားသောအရာကိုမေးခွန်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ “ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းကိုလှပသောသိပ္ပံနည်းကျတိကျမှုဖြင့်ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လီယိုနာဒိုသည် Orb ကိုမထိသောအရာဝတ္ထုများကိုခိုင်မာသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသော orb အားဖြတ်သန်းသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောပုံပျက်ပုံကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
“ Orb (သို့) မှန်ဘီလူးပုံသဏ္shapedာန်တူတဲ့ solid solid glass သို့မဟုတ် crystal ကပုံကြီးချဲ့တာ၊ ပြောင်းပြန်လှန်တာ၊ အဲဒီအစားလီယိုနာဒိုဒါဗင်က၎င်းကိုဖြတ်သန်းသောအလင်းကိုအလင်းယိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မပျက်ပြားစေနိုင်သည့်အမှောင်ဖန်လုံးပူဖောင်းကဲ့သို့ပုံဆွဲခဲ့သည်။ ”
သေချာသည်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပန်းချီကားနှင့်မာစတာကို ပို၍ နားလည်အောင်လေ့လာရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ဤအရာကိုပြောပြီးပန်းချီကား၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ခရစ်တော်၏ပုံပန်းသဏ္aာန်နှင့်ပုံသဏ္beingာန်ဖြစ်သောကြောင့်အနုပညာအပြည့်အ ၀ ကိုယ်စားပြုသော orb ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်၏မှတ်ချက်နှင့်သဘောတူညီသည်။
လီယိုနာဒို၏ပန်းချီကားများသည်သူတို့၏လျှို့ဝှက်နက်နဲမှုနှင့်မရေရာမှုကြောင့်လူသိများသည်။ သူသည်မှန်ဘီလူးနှင့်အလင်း၏နည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးများကိုကောင်းစွာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ရုပ်ပုံကိုအတိအကျတိတိကျကျဖြင့်ပြန်ဖွင့်ပါကနောက်ခံပုံပျက်သွားလိမ့်မည်။
သူကပန်းချီကားကိုစိတ် ၀ င်စားလွန်းလို့ဒီပုံကိုမဖော်ပြဖို့သူရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
အဆိုပါ Salvator ကမူ Mundi စုဆောင်းသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအမှန်ပင်စိတ်လှုပ်ရှားစေမည့်ထူးခြားသောပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအကျွမ်းတဝင်ရှိသူသို့မဟုတ်ပြတိုက်အချို့သည်ဤလက်ရာကိုအီတလီသို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်နယူးယောက်ရှိခရစ်စတီမြို့၌ကျင်းပသည့်သမိုင်းလေလံပွဲတစ်ခုတွင်အမှတ်တရမှတ်မိနိုင်မည့်သမိုင်းဝင်လေလံပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံတွေ့ဆုံသည်။ CC
(အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်မှနိုဝင်ဘာ ၄ ရက်အထိ) နယူးယောက်တွင်ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းမပြုမီပြသခဲ့သော Christie's သည်ဤထူးခြားသောပန်းချီကားကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိဟောင်ကောင် (အောက်တိုဘာ ၁၃-၁၆)၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို (အောက်တိုဘာ ၁၇-၂၁) နှင့်ပြသပါမည်။ လန်ဒန် (အောက်တိုဘာလ 28-4) ။
an ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှထုတ်ယူထားသော Quote ကို Dalya Alberge မှ The Guardian တွင်တွေ့ရသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် Christie ၏ The Guardian ကိုတရားဝင်တိုင်တန်းခြင်းဖြစ်သည်။
Tags:အတတ်ပညာ • လလေံပှဲ • ခရစ်စမတ် • လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ • အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာ • နယူးယောက်
“ မှတ်ချက် ၁ ခုလီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏ Christie's မှ 'Salvator Mundi' - နက်နဲသောအရာတခုကိုလက်ရာမြောက်သောလက်ရာတစ်ခု"
Pingback: Da Vinci ၏ 'Salvator Mundi' သည်လေလံတင်ရောင်းချခြင်းသမိုင်းတွင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည် HIGH ရတနာအိပ်မက်